ARC miarahaba ny sekreteran'ny kabinetra voatondron'ny loholona LGBTQ aloha
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » ARC miarahaba ny sekreteran'ny kabinetra voatondron'ny loholona LGBTQ aloha
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Vaovaom-panjakana • LGBTQ • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Pete Buttigieg dia nanamafy fa sekreteran'ny fitaterana any Etazonia faha-19
Ny ARC dia manaiky ny anjara asa lehibe navoakan'ny Departemantan'ny fitaterana mba hisian'ny rafitra fitaterana azo antoka sy azo antoka izay mifantoka amin'ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny mpiasa eo alohany, ary ny fitohizan'ny fivezivezen'ny entana ao anatin'izany ny kojakoja ara-pitsaboana sy vaksiny
Ny Airlines Reporting Corporation dia niarahaba an'i Pete Buttigieg tamin'ny fanamafisana ny tantarany
Ny ARC dia manaiky ny anjara asa lehibe apetraky ny Departemantan'ny fitaterana hiantohana ny rafitra fitaterana azo antoka sy azo antoka
Ny Airlines Reporting Corporation (ARC) dia miarahaba an'i Pete Buttigieg tamin'ny fanamafisana ara-tantara azy amin'ny maha sekretera ny fitaterana an'i Etazonia faha-19 azy.
Araka ny Covid-19 Ny krizy dia mitohy miantraika amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an'habakabaka, ny ARC dia manaiky ny andraikitra lehibe ateraky ny Departemantan'ny fitaterana milalao mba hahazoana antoka ny rafitra fitaterana azo antoka sy azo antoka izay mifantoka amin'ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny mpiasa eo alohany, ary ny fitohizan'ny fivezivezen'ny entana ao anatin'izany ny kojakoja ara-pitsaboana sy vaksinim-bidy.
Rehefa mivoaka amin'ity krizy ity isika dia vonona hiatrika ny filàna maika hananganana fotodrafitrasa maharitra sy maharitra izay mametraka an'i Etazonia amin'ny fitomboana ara-toekarena maharitra i Etazonia. Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ARC dia naneho fahavononany amin'ny indostrialy maharitra kokoa, ao anatin'izany ny fampiasam-bola amin'ny haitao mahomby kokoa sy ny teknolojia fakana karbonika. Ho fanampin'izay, faly izahay amin'ny fampiasam-bola mitohy natao mba hanitarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny seranam-piaramanidina sy ny maso ivoho hanompoana ny mpandeha. Rehefa mipoitra ny teknolojia vaovao sy ny fomba fanao tsara indrindra, ny fiaraha-miasa eo amin'ny governemanta sy ny indostria dia ho zava-dehibe amin'ny fananganana fotodrafitrasa izay mampifandray kokoa ny olona sy ny entany ary ahafahan'ny orinasa manerana ny firenena hahomby.
Amin'ny maha sekretera kabinetran'ny loholona LGBTQ an-kalamanjana voalohany azy dia faly izahay amin'ny feo tokana izay hitondran'ny sekretera Buttigieg hitarika ny federaly — iray izay mifanaraka amin'ny soatoavin'ny ARC sy ireo vondrom-piarahamonin'ny dia lavitra.